အန်းဒရွိုက်သည်အခမဲ့အင်တာနက်က Apps ကပ | အန်းဒရွိုက်ကိုအင်တာနက်က App | Apps ကပ APK ကို
ပင်မစာမျက်နှာ » အင်တာနက်က Apps ကပ » စာမျက်နှာ 2
Category: - အင်တာနက်က Apps ကပ
အင်တာနက်က Apps ကပ APK ကို
အဘယ်သူသည်မိမိတို့၏ Device များပေါ်တွင်အစာရှောင်အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်မလိုချင်ပါသလဲ? ကြောင့်တနေ့နှင့်တန့်အသတ် bandwidth ကိုတို့ကပိတ်ဆို့မှုကိုတစ်ရက်တိုးမြှင့်ရန်, နိမ့်မြန်နှုန်းဟာအသုံးပြုသူများအတွက်အမှန်တကယ်နှောင့်အယှက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းတာက, သင်အများကြီးရှာတှေ့နိုငျ အင်တာနက် apps များ စတင်ရန်။ ထိုကဲ့သို့သောချောမွေ့အသံနှင့်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုမြန်ဆန် browsing အတွက်အတွေ့အကြုံ, အစာရှောင်ခြင်း downloads, နှင့်ပိုပြီးအဖြစ်ခိုင်မာတဲ့ကို Wi-Fi ကို signal ကိုရှိခြင်း၏ကွဲပြားခြားနားသောအကြိုးကြေးဇူးမြားရှိပါတယ်။ သငျသညျမြန်နှုန်းမြင့်ဆက်သွယ်မှုများအတွက် signal ကိုမြှင့်တင်ရန်အနည်းငယ်လက်မရွှေ့ဒါမှမဟုတ်တချို့ configurations tweaks ရန်ရှိသည်။
သငျသညျအကောင်းဆုံးရှာနေနေတယ်ဆိုရင် အင်တာနက် apps များ Android အတွက်, သင်ပိုင်ခွင့်အရပျမှာရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့သိသိသာသာသင့်မိုဘိုင်း signal ကို၏ bar ကိုမြှင့်နိုင်သောအကောင်းဆုံးကိုအင်တာနက်အာနိသင်တိုးမြှင့် apps များအချို့စာရင်းပါပြီ။
အဘယ်ကြောင့်သင်ကအင်တာနက်ကို Apps ကပလိုအပ်သလား?
ခွဲဝေမှု bandwidth ကိုအတူ signal ကိုအစွမ်းသတ္တိကိုထိခိုက်တစ်ကဏ္ဍမှပါရာမတူညီတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေလည်းရှိပါတယ်။ အဓိကအကြောင်းရင်းတချို့ကအနိမ့်သိမ်းဆည်းခြင်း, နိမ့် RAM ကို, နောက်ခံအပြေးအလွန်များ apps များနှင့် junk နှင့် cache ကိုဖိုင်များကိုလုံလောက်သောဆက်သွယ်မှုအသုံးပြုကြသည်။ သူတို့ကအန္တရာယ်မပေးပုံရသည်သော်လည်း, သူတို့သည်လည်းနိမ့်အင်တာနက်မြန်နှုန်းနောက်ကွယ်မှအဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်။ ငါတို့သည်ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန် app အချို့ရှိသည်။
ဤရွေ့ကား apps များသူတို့က, Wi-Fi ကို signal ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစီမံခန့်ခွဲ, ထိုသို့ပိုကောင်းအောင်နိုင်ပါတယ်အဖြစ်အလွန်အစွမ်းထက်နှင့်နေရာလေးကိုဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကား apps များအားလုံးသင့်ရဲ့ connection ကိုလိုအပ်ချက်များအတွက် All-In-One ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျ, အပေါငျးတို့သဟော့စပေါ့ရရှိနိုင်ပါတွေ့ပါကသူတို့ connection ကိုအမျိုးအစားနှင့် signal ကိုခှနျအားကိုစစ်ဆေးလျက်, အကြိုက်ဆုံးတဦးတည်းကိုချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကား apps များသည်လည်းသင်တို့ကိုပိုကောင်းတဲ့ signal ကိုရရန်ပိုင်ခွင့်အနေအထားကိုကူညီရှာဖွေပေးနိုင်သည်။ ဤရွေ့ကား app များကို Android မှာနီးပါးအားလုံးဗားရှင်းကိုထောကျပံ့နိုငျပွီးသူတို့သာသေးငယ်တဲ့အာကာသလိုအပ်ပါတယ်။
သငျသညျငွိမျဝနှင့်အတူက Wi-Fi ကိုအချက်ပြမှုများကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့အဖြေတစ်ခုရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, သင်တို့သည်ဤအက်ပ်များမှရွေးချယ်နိုင်သည်။ သငျသညျအေးသော graphical အရက်ဆိုင်များနှင့်ပုံစံမျိုးစုံနှင့်အတူအနီးဆုံးဟော့စပေါ့၏အချက်ပြအစှမျးသတ်တိနှငျ့ status ကိုစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
အခမဲ့ Open ကိုဝိုင်ဖိုင်ချိတ်ဆက်
wifi Password ကို [Root]
သတိပေးချက်သမိုင်း Log in ဝင်ရန်
ပုဂ္ဂလိက Browser ကို - မတ် ...
ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် DNS (အဘယ်သူမျှမ Root 3G / ဝိုင်ဖိုင်)
Wi-Fi Router Manager ကို -...
wifi Hotspot - အိတ်ဆောင် ...
စင်ကြယ်သော Web Browser-Fast & ...
Quark Browser ကို - ကြော်ငြာ ...
WiGLE Wi-Fi Wardriving
Infosonics Browser ကို
4G LTE ကိုသာလျှင် Mode ကို
Mint, Browser ကို - Lite ကို ...
ဘန် Browser ကို-download, စူပါ ...
ဒေတာချွေတာပြီးတော့ဒေတာများကို Manager က ...
float Browser ကို
Smooz Browser ကို
wifi Booster - ဝိုင်ဖိုင် ...
Wi-Fi Dumpper (WPS Connect ကို)
Ultrasurf (beta ကို) -...
Windscribe VPN ကို
ဘာသာပြန်ဆိုသူ, စာသားနဲ့ web ...
Net က Optimizer & Booster ...
1.1.1.1: မြန် & ပါစိတ်ချရသော ...
Wi-Fi သူခိုး Detector -...
အခမဲ့မြန် Unlimited GeckoVPN ...
osmino: ဝေမျှမယ် Wi-Fi အခမဲ့
လွန်ခဲ့သော 1234... 19 နောက်တစ်ခု